सुनको मूल्यमा रेकर्ड ब्रेक, कति पुग्यो ? - Jhilko
सुनको मूल्यमा रेकर्ड ब्रेक, कति पुग्यो ?
आज नेपालको बजारमा सुनले मूल्यमा नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । आज प्रति १० ग्राम छापाबाल सुनको मूल्य ५४,८७० पुगेको छ । जुन प्रति तोलाको मूल्य ६४,००० पुगेको नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यस अघि सवैभन्दा बढी मूल्य कायम भएको २०७० भदौ १२ गते र २०७५ फागुन ८ गते समान मूल्य प्रति १० ग्रामको ५४,२७० पुगेको थियो । जुन प्रति तोलामा ६३,३०० थियो ।
सुनको मूल्य ह्वात्तै बढ्नुमा चीन र अमेरिका विच चलिरहेको ब्यापार युद्धले कुनै निकास नपाउनु, फेडेरल बैंकले ब्याज बढाउने घोषणा गर्नु, अन्तराष्ट्रिय बजारमै शेयर बजार डामाडोल हनु लगायतका कारणले अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ता सुनतिर आकर्षित हुँदा विदेशमै सुनको मूल्य बढ्न पुगेको हो ।
आज अन्तराष्ट्रिय बजारमा भने प्रतिऔंस १३८०.८० डलरमा कारोबार भएको छ । नेपाली बजारमा अमेरिकी डलरको विनिमय दर १११.६५ पैसा कायम छ । । यस अघि पनि झिल्को डटकमले सुनले मूल्य ब्रेक गर्ने संकेत शीर्षकमा समाचार प्रेसित गरेको थियो ।
अर्जेन्टिना र पाराग्वेबीचको खेल बराबर
मोदीको प्रयोग दिल्ली चुनावमा सफल होला ?